Ka saar qoyaanka gaaska. Fadlan sheeg shuruudaha gaarka ah.
Fadlan dooro qalabkan adigoo raacaya sawirrada iyo naqshadaynta injineernimada.
Nooc ka mid ah qalabka gaaska sifaynta,
Shuruudo gaar ah iyo heerar, fadlan nala soo socodsii.
qalab isku dhafan
Waxaa loo qaybin karaa sheyga dhaldhalaalka ah iyo waxyaabaha birta ka samaysan. Waxyaabaha kala duwan ee biogas iyo wax soo saarka biogas, noocyo kala duwan ayaa la xushay.
Aaladda nabdoonaanta si loo ilaaliyo badbaadada qalabka loona joojiyo xaaladaha degdegga ah; fadlan ka tag farriin haddii aad leedahay baahiyo gaar ah.
Qeexitaanka iyada oo loo eegayo xaaladda dhabta ah ee loo habeeyay, loo kala saaraa birta kaarboon iyo dhaldhalaalka ah. horudhaca guud 1.Waxay ku xiran tahay baahiyaha dhabta ah ee isticmaalka noolaha, waxay fulisaa qulqulatada nidaamsan, fuuq-baxa iyo daaweynta kale ee daahirinta dhirta. Nidaamku waa nidaam qallalan, oo aan kaliya xaqiijinaynin hufnaanta sare ee desepurization iyo fuuqbaxa, laakiin wuxuu sidoo kale ka dhigaa nidaamka oo dhan mid fudud, maarayn maalinle ah oo ku habboon iyo hawlgalka cos ...
100 dhuuban oo mitir mitir ah biogas Torch Set
Xaddiga gubashada methane: 100m3 / saac
Waxyaabaha qoyaanka methane: ≤6%
Maaddada ka kooban methane-ka: ≥35% -55% (Waxyaabaha ay ka kooban yihiin methane ilaa 55%, guluubku wuxuu gubtaa ilaa 100 mitir cubed saacaddii)
Waxyaabaha ay ka kooban tahay hydrogen sulfide: ≤50ppm
Cilladaha farsamada: ≤0.2%
Dhuunta ugu weyn ee gaaska keenta waa inay ka yaraato DN40 (heerka cadaadiska 3kpa).
Kala-baxa dareeraha adag
Biyo-weji, qalab dheef bullaacadeed. Hordhac: Nooc fidsan oo wareegaya oo ah nooc gooni ah oo dareere ah oo dareere ah ayaa inta badan ka kooban matoor weyn, matoor aan xirneyn, koontaroolka gacanta, dhuumaha iyo qalabka kale. Qeybaha unugyada martida loo yahay, shaashad mesh, cirib galka, mootada gariirka, gawaarida khiyaanada, culeyska, rarida aaladda .Shaqeyntu waa sida soo socota: bamgareyn aan xirneyn oo aan matagin matoor kuleyl ah jirka, xawaaraha mootada, hoos imaadka ficilka gudbinta, tuujinta g ...